Loka ho an'ny mpitarika ho avy IWCA - Fikambanan'ny ivon-toerana manoratra iraisam-pirenena
ANTSO ho an'ny APPLICATIONS: 2022 IWCA Future Leader Scholarship Awards
Ny International Writing Centers Association (IWCA) dia manolo-tena hanome fahafaham-po amin'ny fampandrosoana matihanina ho an'ny mpianatra ao amin'ny vondrom-piarahamonina foibe fanoratana ary manaiky ireo mpampianatra mpiara-mianatra sy/na mpitantana eo amin'ny ambaratonga ambony sy ny diplaoma izay mampiseho fahaiza-mitarika matanjaka sy fahalianana amin'ny fandalinana foibe fanoratana.
Ny vatsim-pianarana ho an'ny IWCA Future Leaders dia homena ireo mpitarika foibe fanoratana efatra ho avy. Isan-taona dia mpianatra iray farafahakeliny ary mpianatra iray farafahakeliny no ekena.
Ireo mpangataka izay mahazo ity vatsim-pianarana ity dia homena $ 250 ary hasaina hanatrika sakafo antoandro na sakafo hariva miaraka amin'ireo mpitarika ny IWCA mandritra ny fihaonambe IWCA isan-taona.
Mba hampiharana dia tsy maintsy mpikambana ao amin'ny IWCA ianao ary manolotra fanambarana an-tsoratra amin'ny teny 500-700 miresaka momba ny fahaliananao amin'ny foibe fanoratana sy ny tanjonao amin'ny fotoana fohy sy maharitra amin'ny maha-mpitarika ho avy amin'ny sehatry ny fanoratana. Alefaso amin'ny alàlan'ny endrika Google ity.
Ny fanambaranao dia mety ahitana fifanakalozan-kevitra momba ny:
Drafitra akademika na asa ho avy
Fomba nandraisanao anjara tamin'ny foibe fanoratanao
Fomba novolavolainao na tianao hovolavolaina amin'ny asa foibe fanoratanao
Fiantraikany nataonao tamin'ny mpanoratra sy/na ny fiaraha-monina misy anao
Criteria ho an'ny fitsarana:
Ahoana no anehoan'ny mpangataka ny tanjony manokana sy amin'ny antsipiriany amin'ny fotoana fohy.
Ahoana no anehoan'ny mpangataka ny tanjony manokana sy amin'ny antsipiriany maharitra.
Ny fahafahan'izy ireo ho mpitarika ho avy eo amin'ny sehatry ny foibe fanoratana.
Alefaso azafady izay fanontaniana (na fangatahana avy amin'ireo tsy afaka miditra amin'ny endrika Google) any amin'ny IWCA Awards Co-Chairs Leigh Elion (lelion@emory.edu) sy Rachel Azima (razima2@unl.edu).
Ny fangatahana dia tokony hatao amin'ny 1 Jona 2022.
Meara Waxman, Oniversite Wake Forest